ဝေဒနာတွေ ထဲမှာတော့ ဘယ်လို ဝေဒနာက အဆိုးရွားဆုံး လဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ်တကယ် ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဝေးကွာနေရတာက အဆိုးဆုံးလို့ ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်….။ ပြီးတော့ မချစ်မနှစ်သက်တဲ့ သူနဲ့ အတူ နေရတာလည်း အဆိုးရွားဆုံး ဝေဒနာလို့ ထင်တယ်။ ချစ်ခင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဝေးကွာပြီး မချစ်ခင် မနှစ်သက်နိုင်တဲ့သူ တွေနဲ့ နေရတာဆိုရင် တကယ့်ကို အဆိုးရွားဆုံး ဝေဒနာ ဖြစ်သွားပါပြီလေ။
ခုချိန်မှာ လူတွေဟာ မခွဲခွာချင်ပေမဲ့လည်း ခွဲခွာနေကြရ တာပဲ.မဟုတ်လား…။ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ဇနီး နဲ့ ခင်ပွန်း၊ ညီအကို မောင်နှမ၊ ဆွေမျိုး သားချင်း၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ.၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်နေရာလေး တခု………..
အခြေအနေ တခုအောက်မှာ မျှော်လင့်ချက် လေးနဲ့ အသက်ဆက် နေရပေမဲ့ ရင်နဲ့ရင်းပြီး နေရတဲ့ ဘ၀ တခုဟာ အဓိပ္ပါယ် ရှိနိုင်ပါ့မလား လို့လည်း တွေးမိတယ်။ ဒီလို အခြေအနေ တခုနဲ့ နေနေရတဲ့ သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လို ဆက်ရှင်နိုင်ပါ့မလဲလို့ ဆိုတော့……. ပျော်စရာ တခုခုကို ကြံဖန် ရှာဖွေကြ၊ ၀ါသနာ ပါတာ တခုခုကို လုပ်ခွင့်ရကြ၊ အကျိုးရှိစေနိုင်မဲ့ အလုပ် တခုခုကို လုပ်ခွင့် ရနေကြ၊ တန်ဖိုးရှိရာ တခုခုကို လုပ်နေကြ…………. ဆိုရင်တော့လည်း……..!!!!!
ဒီလို ခေတ်ကြီးထဲမှာ လူဖြစ်ခွင့် ရလာတာကိုပဲ တခါတလေ အလိုမကျမိ…။
ကိုယ့်အပေါ် အားပေး နားလည်နိုင်မဲ့ သူ တဦးတလေမှ မရှိရင်တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဖြေနိုင်မဲ့ အတွေးလေး ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ခံစား သက်သာမှုလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားတွေ…. ရလာနိုင် ဖို့သာ ဆုတောင်းမိပါရဲ့………!
တခါတလေတော့လည်း မျှော်လင့်ချက် သန်းလာနိုင်မဲ့ စက္ကန့်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး အချိန်တခု စောင့်ရမယ်လို့ ပြင်ဆင် ထားမ်ိတယ်။
ဒါလည်း စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တခု ပါပဲ…။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက် တွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖေါ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ချည်းပဲ မဟုတ်တဲ့ အတွေးအခေါ် အဖြစ် တွန်းပို့ ပေးနိုင်ရမယ်….. ယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့ ရှေ့ကို လှမ်းလို့ ချီတက်နိုင်ရမယ်….. ဆိုပြီး တော့လည်း အားတင်းမိပြန်တယ်။
ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားတင်းရင်းနဲ့ ဘ၀ ဆိုတဲ့ လောက လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ကို တက်ခဲ့တာ ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ တက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ….!
အရေးကြီးတာကတော့ တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ နေတတ်ဖို့၊ တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ ပါပဲ…။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်နေရာလေးကို ခွဲခွာလာရတဲ့ သူတယောက်အနေနဲ့ တန်ဖိုးရှိစွာ အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိတယ်။
ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ဖို့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်လေး တောင်မျှ မရှိနိုင်ရင် သေလူနဲ့ ဘာမှ မထူးခြားတဲ့ ဘ၀ တခု ကို ပိုင်ဆိုင်လို့….!!!!!
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:38 PM
ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဝေးရတာထက် မချစ် မနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ အတူနေရတဲ့ ဆင်းရဲခြင်းက ပိုဆိုးတယ်။ ခွဲခွါရတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးပေ့ါလေ... ဒါတွေကို မပြောချင်တော့ဘူး သဒ္ဓါရယ်..။ ဟုတ်တယ် တခါတလေ အလိုမကျ၊ မနေတတ် မထိုင်တတ်နဲ့ ဖြစ်မိသား။
အားလုံးကတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဖြတ်သန်း နေကြရတာ ပါပဲလေ..။
ဆုံတွေ့နိုင်မှာပါ သဒ္ဓါရယ်.... အားတင်ထားနော်။
ရင်နဲ့အမျှ ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ...
သဒ္ဓါရေ...ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲလေ... အင်ကြင်းဆို ခဏ ခဏ ခံစားရလွန်းလို့ အရေတောင် တော်တော်ထူနေပြီ...ဒီလိုပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အားတင်းရင်းပေါ့...စ်ိတ်ဓါတ်မကျနဲ့နော်...
သဒ္ဓါတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး...သဒ္ဓါနဲ့ ဘ၀တူတဲ့ အင်ကြင်းတို့တွေရှိတယ် သိလား...
လူဆိုတာ မျှော်လင့်ခြင်း နဲ့ အသက်ရှင်နေတာလေ။
ဒီမျှော်လင့်ချက်ကတော့သေချာပါတယ် မိသားစုနဲ့ ပြန်ဆုံကြရမယ် ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ကြရမယ်။ ဘဝမှာ အဆိုးတွေ များခဲ့တာ လူတိုင်းပဲ မဟုတ်လား ။ ဒီတော့ အကောင်းဆုံး တွေကို အားလုံးပြန်ရကြရမှာပါ။ ယုံကြည်အားတင်းထားပါ
အားတင်းရင်း.......မျှော်လင့်ခွင့်ဆိုတာ.....နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ လူတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ ရှိခွင့်တစ်ခုလေ........း))
အသက်ရှင်နေတာလဲ ဒီမျှော်လင့်ချက်ကြောင့် အသက်ရှင်နေကြတာဘဲမဟုတ်လား
အရေးကြီးတာ လွယ်လွယ်နဲ့ ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်ကို
သြော်.. သြော်.. ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ၀ိပရိနာမဒုက္ခက တယ်ဆိုးသကိုး ချစ်တဲ့သူရော မချစ်တဲ့သူရောမရှိပြန်တော့ရင်လည်း အထီးကျန်ခြင်း ဒုက္ခ :P...
ကျွန်တော် ကြားဖူးတာ လောကမှာ ချမ်းသာခြင်းဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့ ဆင်းရဲခြင်းကလွှတ်ရာပဲ ရှိတယ်တဲ့ ဒီလိုပြောလို့အား လျော့မသွားနဲ့ဦးဗျာ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမှပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားနေတဲ့သူအတွက်တော့ ထင်တာထက် တစ်ခုခုပိုလုပ်နိုင်မှာပါ..
မသဒ္ဒါရေ ... မျှော်လင့်ခြင်းဟာ လမ်းပြကြယ်တခုပါပဲ ...